Ndeipi nzira dzakanakisisa dzekuvakira shure kwakasimba kwewebsite yangu?
Chirongwa chakakodzera chekuvaka chikwata nenzira yakarurama yekuwana zvakakosha kumashure inogara ichipa ruzivo rwakanakisisa mukutsvaga kwewebhu uye kuenzaniswa kwekusimudzira nzvimbo munzvimbo yeSERPs. Tisati tatarisa kuburikidza neurongwa hwemaitiro anobudirira kwazvo uye maitiro ekupa shure shure kwemasimba ekubvumirana newebsite yako kana bhulogi, regai nditange nehupenyu hwangu. Ndinokurudzira kutarisa maitiro mashomanana okudzivisa apo unenge uine sarudzo yakanaka yekuvaka ye SEO.
Pashure pezvose, kune nzira dzakawanda dzekuvaka mashure ekusimba. Panguva imwecheteyo, panewo nzira dzakawanda dzisina kururama dzinogona kuita kuti zvive nyore kupiwa chirango chakanyanya neGoogle, uye iwe webhusaiti yako yekudzoka inowanzotora nzira yakaoma kwazvo. Uyezve, kana zvasvika pakunyanyisa, izvozvi zvinogona kunge zvisingakanganwiki zvachose. Kuti udzivirire mamiriro ezvinhu akaipa akadaro, hezvino izvo zvingafanirwa kudzivirirwa pamutengo wose:
kutenga nekutengesa mabasa ne backlinks;
kushandura chero shanduro dzekugadzira zvigadzirwa;
kushamwaridzana kukuru pamwe nesangano;
kutarisana nemakwikwi ekubatana;
kusika zvisina maturo kumashure uye kuita kuti vararame;
kushandiswa kwehuwandu, panzvimbo yehupamhi-hukama;
kutora matanho ekubatanidza mapurasi kana backlink inoita web-rings.
Zvechokwadi, kushandisa zvirongwa izvi zvingakupawo kukurumidza kusimba kwekusimudzira kushandiswa. Kunyange zvakadaro, vose vavo vachabatwa uye vacharangwa neGoogle, nokukurumidza kana kuti gare gare. Yeuka, nzvimbo dzakaderera dzehutaneti nemadzinza haisi iyo nzira yekuenda nayo shure shure kwemasimba ane simba uye kufambira mberi kwenguva refu nemazinga akakwirira. Ndosaka tichifunga kuti Google nguva dzose inoita zvakanakisisa kuti iwane hutano hwakanaka chete, ndichaenda kukuratidza maitiro akawanda uye maitiro aakawana anonyatsonaka panguva ino. Nenzira, ini ndakaedza vose zvavo pawebsite yangu yebhizimusi. Hezvino nzira iyo iwe unogona kuwana simba rakasimba kumashure kwezvinodiwa SEO zvitsva:
1. Internal Links mukati mehutano hwakazara we backlink yewebsite inowanzosiyiwa nevanhu vakawanda. Zvechokwadi, mukati mehutano iko chaizvoizvo inouya kubva pane rimwe peji kuenda kune imwe - iri mukati memumwe webhusaiti. Cherechedza, zvisinei, kuti kana waita zvakanaka uye wakabatanidzwa neshoko rakanaka-refu remuswe, mukati mako unogona kupa zvinotevera:
zviri nani peji yepamusoro yewebsite yose;
kugoverana kwakaenzana kwekubatanidza juice;
kuderera kwechikwereti pasi mukati pewebsite pazvose;
kugadziriswa kwemigwagwa uye kubudiswa kwehupenyu hwekare peji;
kukanganisa kunyanzvi kunogona kuita kuti pave nenheji yepamusoro yezwi.
2. Nzvimbo dzekutengeserana dzemunharaunda ndiyo mikana yakaisvonaka yekutora backlink simba kune webhusaiti yako yepamusoro webhusaiti. Iva nechokwadi chekuvandudza nzvimbo dzako dzekutsvaga kwekune imwe nzvimbo uye kusimbisa simba rako rewebsite panguva imwe chete. Zvose zvaunoda pano ndezvokuti uchengetedze NAP imwechete yezvinhu zvose nokuda kwekutsanangurira kwekutsvaga pazvikuru zvekutsvaga injini seGoogle, Yahoo, uye Bing.
3. Reshaping your plain page content mune chimwe chinhu chinokumanikidza, chakadai se infographics, inovawo nzira yakanakisisa yekuvaka backlink yakasimba kune webhusaiti yako kana blog. Uyezve, inenge iri chirongwa chekugadzirira uye chakanakisisa chekuvandudza kuparidzira kwako kwevanhu panguva imwe chete. Iwe usati watanga kuwana zvakanakisisa backlinks, iva nechokwadi chokuti infographics yako yakajeka, iri nyore uye inoshanda kune vateereri vako sezvaunogona. Uyewo, edza kuchengetedza nekukurumidza kuendesa mberi nekukura kwavo kwemazana kusvika ku2000 pixels. Gadzirisa kwete kupfuura mavara matatu uye huwandu hwemashoko maviri. Uye musakanganwa kugadzira nyaya inofadza iyo inogona kuramba ichida kuziva komunhu kusvika pakupedzisira. Kana imwe nguva yako yakanakisisa inopedzisira yaitika, ingovaisa kune mawebsite akazvitsaurirwa - shandisa mirairo yakananga kuGoogle, yakadai se "tumira infographic," "inurl / intitle: tumira infographic," "allintext: tumira infographic," nezvimwe Source .